အထူး | Burma Muslim | Page 2
Category Archives: အထူး
By burmamuslim on June 17, 2014 | Leaveacomment
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••အဘိဓမ္မာကျမ်း စာမျက်နှာ ၅၂၃ စာပိုဒ် (၄)ကိုကြည့်ပါ။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဤသို့ဟောကြား
အ၀ီန္ဒေယျ အပမေယျ ဧကော ဗုဒ္ဓေါဝိပရီ နာမတော နတ္တိ
အဓိပါယ်က အ၀ီန္ဒေယျ အတုလံ
အပမေယျ အတုမရှိ ဧကော တစ်ဆူတည်းသောဗုဒ္ဓေါဝိပရီ အရှင်သည် ( ထာဝရ အရှင်သည် )
နာမတေားးး အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ စားခြင်းသောက်ခြင်း၊
မေထုန်မှီ ၀ဲခြင်း စတဲ့ အခြား အခြား
နတ္တိးးးး ကင်းစင်တော်မူ၏။
(ထာဝရ ဘုရားရှင် ) ဆိုသည်မှာ အတုလံ၊ အတုမရှိ (နှိုင်းယှဉ် ပြိုင်ဘက် မရှိချေ)ထိုတစ်ဆူတည်းသောအရှင်
သည်အိုခြင်း၊နာခြင်း၊သေခြင်း၊စားခြင်းသောက်ခြင်းမေထုန်မှီ ၀ဲခြင်း စတဲ့ အခြားသော(ဖန်ဆင်းခံလူများကဲ့သို့ ) ကင်းစင်တော်မူ၏။
လျှင်အိုနာသေခြင်းစားသောက်ခြင်း ကာမတဏှာကင်းစင်သောအခြားခြားသောကင်းစင်သောဘုရားရှင်သည် မုချဧကန်ရှိနေချေသည်ထိုသူမှာလူသါး
မည်ထိုအရှင်သာအမှန်စင်စစ် ခ၀ပ်ယုံကြည် ကိုးကွယ် အားထားရာ၊ ကိုးကွယ်ရာ အရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ဂေါတမလူသားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလမ်းညွှန်ခဲ့ဟန်တူလေသည်။
(သို့ မဟုတ်ပါက ဤတရားသည် မည်သည့် အဓိပါယ်ဆောင်ပါသနည်း)
နှင့် ငါသည် ကိုးကွယ်ရာမဟုတ်၊ မကြာမြင့်မည်ငါသည်ရုပ်လည်း
တည်း။ငါချန်ခဲ့သောငါ့တရားတော်များကိုသာ ဆည်းကပ် အားထားကြ။
ငါ့အား တ၇ားဒေသနာတော်များကို ချီးမြင့်ခဲ့သော”ငါ့ဘုရား ကိုသာ ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြလော့ ´´ (သံန္ဒယုတ်က္ခာဓမ္မာနံနမ္မောဟောတုကျမ်း )ဤတွင် ငါ့ဘုရား ဟူသည် မည်သူနည်း။မေးစရာဖြစ်လာပေသည်
ဖန်ဆင်းရှင်ရှိနေကြောင်းလူသားအသီးသီးထံသို့အရောက်မဟာလူသားများ၊တမန်တော်များမှတဆင့် ၀ဟီ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ဗျာဒိတ်တော်များ
ပို့ချပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းရှင်နှင့်တုပနှိုင်းပြိုင်၍ကိုးကွယ်ရာအရှင် အတုလံ၊ အတုမရှိချေ။
صلي الله عليه وسلمတမန်တော်
သူတို့အခေါ်အရိမေတ္တယျမြတ်စွာဘုရား )အားလုံးတို့မှာလာခြင်းကောင်းသော လူသားတမန်တော်များ၊ မဟာလူသားများ၊ ဘုရားသခင်၏စေတမန်များဖြစ်ကြပါတယ်။ထိုလူသားဘုရားများမပွင့်ပေါ်မှီတည်းကပင်တရားဆိုတာတည်ရှိနေ
ထိုတရားကို အလုံးစုံ နားလည်နိုင်ရန် သဗေညုတ္တဥာဏ်တော်ကို မည်သူက ပေးသနည်း။ထိုတရားကို ရရှိစေရန် မည်သူ၏အကူအညီလိုအပ်ပါသနည်း
နတ်၊ဗြဟ္မာ အပေါင်းထက်မြတ်သည် မှန်သော်လည်းထိုအချိန်ကဘုရားရှင် မဖြစ်သေးပဲဘု၇ားရှင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိရန်ကျင့်ကြံအားထုတ်နေရသော သာမန်လူသာဖြစ်၍မိမိကျင့်စဉ်မှား
တမန်တော် မိုဟာမဒ်၊မိုးဇက်၊ယေရှုနှင့် အခြားတမန်တော်များသည်ထိုတရား
၏ အကူညီကို ယူခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် လူသားဟူသည် မြတ်သော မဟာလူသားများအပါအ၀င်ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိ၊ဖန်ဆင်းရှင်၏အမှီခိုလိုအပ်
ထို့ ကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာသည် လူတို့ ၏လုပ်ကျံလီဆယ်ထားသော ကျမ်းတုများဖြင်းဖွဲ့စည်းထားသောသာသနာမဟုပ်ချေ။စစ်မှန်သောသာသနာပင်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ခြင်းနှင့်အစ္စလာမ်သာသနာမှကြိုဆိုနေ
Posted in: သတင်း, အထူး, အထောက်အထား
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ နိုင်ငံရေး လှုပ် ရှား မှု တွင် ပါ ၀င် လျှင် ကျောင်း ထုတ် မည်
By burmamuslim on June 15, 2014 | Leaveacomment
Read more copy image
By burmamuslim on June 8, 2014 | Leaveacomment
မြန်မာ နယ်ခြားအား တရုတ် က ကျူးကျော်လာပြီ
By burmamuslim on June 4, 2014 | Leaveacomment
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကတော့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက သူတို့နဲ့ ဘာမှ မ ဆိုင် တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း၊ ထိုင်ဝမ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန် စတဲ့ နိုင်ငံ တွေရဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေတွေ ထဲက တချိူ့ကို သူတို့ဖာသာသူတို့ အသစ်ဆွဲထားတဲ့ မြေပုံ တွေ အရ တ ရုတ်ပြည်ပိုင်နက် ဖြစ်ပါတယ် လို့ လူပေါ်လူဇော်လုပ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျ တာတွေ လုပ် နေ တာတော့ အားလုံးလည်း အသိပါ။
ကဲဗျာ … မြန်မာ ကလည်း တရုတ်အတွက် တော့ ဘာမို့လို့ မြန်မာကို သူတို့က ချန်ထားရမှာ တုန်း။ ကဲ .. အခု တရုတ်ပြည် ရဲ့ မြေပုံ အရ အစဉ်အဆက် မြန်မာပိုင် နက် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ နယ်မြေ တွေတောင် တရုတ်က ဆွေမျိူးပေါက်ဖော် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု့ ဘာညာ ဆိုတာတွေတောင် မ ထောက်ထားတော့ဘဲ တရုတ်ပြည်ပိုင်နက် ပေါ်တင် ကျူးကျော်လာနေကြပြီ။
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ နမ့်ခမ်းမှာ နယ်ခြားမျဉ်းကို မေလ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ မေလ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ပြန်လည်တိုင်း တာ ကြရာမှာ အရင်ကတည်းက ရှိထားပြီးသား နယ်ခြားကျောက်တိုင်တွေ ကနေ မြန်မာဖက်ခြမ်းကို ကျူးလာပြီး မြန်မာဖက်ခြမ်းက လယ်မြေဧက ပေါင်းများစွာကို တရုတ်ပြည် ပိုင်နက် ဆိုပြီး လုပ်လာပြီ။ နယ်ခြားကျောက်တိုင် အသစ်ကို လာစိုက်တာမှာ ဒေသခံ လယ် သမားတွေက ပြန်နှုတ်ပစ်လိုက်လို့ နောက်ထပ် အသင့် စိုက်ပြီးသား ညောင်ပင် နှစ်ပင်ကို ထပ် လာစိုက်တယ်။ ဒါတွေကိုလည်း အမြစ်က လှန်တူးထုတ်လိုက်ပြန် တဲ့ လယ်သမားတွေကို အရေး ယူဖမ်းဆီး တဲ့ သတင်းကိုတော့ မကြာခင် မှာ မျှော်လင့် ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မူဆယ် နဲ့ ရွှေလီကို ရောက်ဘူးသူတိုင်းက ကျယ်ဂေါင် ဆိုတဲ့ နေရာအကြောင်း ကို သိမှာပါ။ နှစ် နိုင်ငံ နယ်ခြား အဖြစ် ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရွှေလီမြစ် ရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း မြန်မာဖက် အ ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ ကျယ်ပြောလှပြီး မဟာဗျူဟာ ကျလှတဲ့ မြေပြင်အနေအထားဖြစ်ပေမယ်လို့ ဒီ နေရာ ဟာ တရုတ်ပြည် ပိုင်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ဘူးသူတိုင်း သိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာဟာ တကယ်တမ်းတော့ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့စဉ် နိုင်ငံတကာ စာချူပ်တွေအရ မြန်မာပြည်ပိုင်နက် ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတာပါ။ နောက်ပိုင်းကျမှ တရုတ်ပြည်ပိုင်နက် အဖြစ် ပေးလိုက်ဖို့ ယခင် က တိုင်းပြည် အကြီး အကဲဟောင်း ဦးနေ၀င်း ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ တရုတ်ကို ပေးလိုက်ရကြောင်း မှတ်သားဘူးပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက ပေးလိုက်ရတာ ကျယ်ဂေါင် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ တရုတ်- မြန်မာ နယ်ခြားက မြန် မာပိုင်နက် အတော်များများ ပါသွားခဲ့တယ်လို့လည်း အလားတူ မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ်။ သိမီသူ များ လာရောက်ထောက်ပြနိုင်ကြပါတယ်။
အခုလည်း ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္တ ကျယ်ဂေါင်တွေများ ထပ်လာနေပြီလား၊ ထပ်ပြီးလာနေ ဦးမှာလားဆိုတဲ့ ပူပင် သော ကစိတ်က ဒီတိုင်းပြည်က မွေးခဲ့တဲ့ သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မခံချိ မခံသာ နဲ့ ခံစားနေရ ကြောင်းပါ။
ဒီကိစ္စ က တစ်ဖက်မှာ လုပ်တော့မှာမို့ မိမိတို့ ကိုယ်ကျိူးစီးပွားအတွက် တိုင်းပြည်ကို တရုတ် ပြည်ဖက် ရောင်းစားကြမယ့် အာဏာရှိသူများ၊ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များက ဘင်္ဂလားနယ် စပ် ပဋိပက္ခ ကို တမင်အာရုံလွှဲပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေကို မျက်လှည့်ပြတာလား ဆိုတာ တွေး ဆ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ကျူပ်တို့ လူထု ဒီနေ့ထိ ချာတူးလန်အောင် နားလှည့်ပါးရိုက် လုပ်တာ ခံနေရတုန်းပါလားဆိုပြီး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မိပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – တရုတ်ပြည်ကြီးနှင့် ဘာမှမဆိုင်လောက်အောင် ကွာလှမ်းလှသည့် ၊ တောင်တရုတ် ပင်လယ် အတွင်းမှ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ များ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် ရေပြင်ပိုင်နက် များ အား တရုတ်ပြည်က ပိုင်ဆိုင်ပါသည် ဟု အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက် သဖြင့် နိုင်ငံပေါင်း များစွာနှင့် အငြင်း ပွားနေရသည့် တရုတ်တို့၏ မြေပုံသစ်။
By burmamuslim on May 30, 2014 | Leaveacomment
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောနယ်စပ်တွင် ယနေ့ နံနက် (၄) နာရီအချိန်ခန့်မှစတင်၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်ခြားစောင့်တပ် (B.G.B) နှင့် မြန်မာနယ်ခြားစောင့်တပ် (B.G.P) တို့ တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“ မနက်ထ လေးနာရီ လောက်က စဖြစ်တာပါ။ မောင်တောမြို့မြောက်ပိုင်း၊ အမှတ်(၁)နယ်မြေ၊ နယ်ခြားတိုင်အမှတ် (၅၂) နားမှာပါ။ ဘင်္ဂလားနယ်ခြား စောင့်တပ်နဲ့ဖြစ်တာပါ။ အခု ညနေ(၇)နာရီကျော်တဲ့အထိ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတုန်း လို့ သိရပါတယ်။ အသေအပျောက်ရှိ/မရှိကိုတော့မသိရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မောင်တောမြို့ မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်မ်တွေကတော့ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ” ဟု မောင်တောဒေသခံတစ်ဦး က မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် မီဒီယာသို့ပြောသည်။
၂၈-၅-၂၀၁၄ ရက်နေ့ကလည်း နယ်စပ်မိုင်တိုင် ၅၂ နှင့် ၅၃ ကြားတွင် မြန်မာနယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ နယ်ခြား စောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား ပစ်ခတ်သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မြန်မာ နယ်ခြားစောင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်မှ အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တို့ အကြား မေလ ၂၈ ရက်က တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဟုတ်မဟုတ်ကို ၎င်းတို့ မသိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် BGB အရာရှိ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကိုလည်း ၎င်းတို့ အနေဖြင့် မသိသေးကြောင်း၊ မောင်တော ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိ တဦး က ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ပြော ကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်များကမူ ၎င်းတို့၏ BGB အရာရှိအား မြန်မာတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားသည်ဟု ယူဆနေကြောင်းသိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပျောက်ဆုံးနေသည့် BGB အရာရှိ မီဇာနူရ် ရာဟာမန် (Mizanur Rahman ) နှင့် အတူ အမ် ၂၂ ရိုင်ဖယ် တလက်၊ ကျည်ဆန် ၁၂၀ ပျောက်ဆုံး နေကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ထုတ်သတင်းစာအချို့တွင် ဖော်ပြထားကြောင်းလည်းသိရသည်။
မေလ (၂၈)ရက်နေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းအပေါ်တွင် ရခိုင်သတင်းမီဒီယာ တစ်ချို့မှ R.S.Oတပ်မှ တစ်ဦးသေဆုံး သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပြီး ယနေ့ဖြစ်ပွား နေသောတိုက်ပွဲမှာလည်း R.S.O တပ်နှင့် မြန်မာနယ်ခြား စောင့်တပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်သယောင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
“ခွင့်ပြုချက်ရမှ ဘာသာ ပြောင်း၊ မရရင် မပြောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။
By burmamuslim on May 27, 2014 | Leaveacomment
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရေးဆွဲထားသော ဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာပေါင်းစုံ နှင့် နိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် အကာကွယ်ပေး ထားသော ဥပဒေ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံသားတဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ် စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည့်အတွက် လက်မခံကြောင်း၊ ဘာသာကူးပြောင်းမှုကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင် များ၏ ခွင့်ပြုချက်ရမှာသာလျှင် ပြောင်းလဲခွင့်ပြု မည်ဆိုသည့် အချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ပါရှိသည့် နိုင်ငံသားတို့၏ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း မန္တလေးမြို့ ခရစ်ယန် အသင်းတော် များ ကောင်စီ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
“ခွင့်ပြုချက်ရမှ ဘာသာ ပြောင်း၊ မရရင် မပြောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ ပြောင်းမယ်ဆိုရင် အရေးယူမယ့် ပုံစံပဲ။ ဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို အချည်းအ နှီးဖြစ်စေတာပဲ” ဟု ဦးဇော်ဝင်းအောင်က ဆိုသည်။
By burmamuslim on May 25, 2014 | Leaveacomment
အနှစ်ချုပ် – “အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ” လို့ ဟောပြောတာခြင်း တူပေမယ့် ဒလိုင်းလားမား နှင့် သီတဂူသည် မတူညီနိုင်။ ရှေ့ကလူသည် ဘုရားစကား အစစ်အမှန် (ဗုဒ္ဓဝါစန) ကို ဟောပြောနေတာ ဖြစ်ပြီး နောက်ကလူမှာ ဗုဒ္ဓဝါစနကို ဖျက်ဆီးသူ ဖြစ်နေပါ၏။ တရားဓမ္မ၏ နှစ်လိုချီးကျုးဖွယ် ဖြစ်မှုဟူသည် စာသားမဟုတ်၊ ဟောပြောပြနေသူ၏ အခြေခံမူလစရိုက် ၊ စင်ကြယ်သော စေတနာရှိမှု မရှိမှု ပေါ်မှာ မူတည်ကြောင်း ပိဋကတ်တော် အကိုးအကားတို့ကို ယူ၍ စိတ်ပညာနှင့် ဒဿန ရူဒေါင့်တို့မှလည်း ဝေဖန်ကာ အဆုံးအဖြတ်ကို ပြဆိုထားပါသည်။
မထေရ် ဝဿကာရ ။ ။ အသို့နည်း၊ ငါတို့၏ဆရာ ဗုဒ္ဓသည် တပါးပါးသော ဘိက္ခုရဟန်းကို ဆရာမျက်ကွယ်ပြုပြီးနောက် သာသနာကို ဦးဆောင်ရန် ညွှန်ပြခဲ့ပေ သလော ?
မထေရ် အာနန္ဒာ။ ။ မညွှန်ပြခဲ့ပါ
မထေရ် ဝဿကာရ ။ ။ သို့ဆိုလျှင် သံဃာတို့အကြား ကွဲပြားခဲ့သော် ကိုးစားရမည့် ခေါင်းဆောင်ဆိုသူ မရှိလျှင် အသို့ ဖြေရှင်းပါအံ့ ?
မထေရ် အာနန္ဒာ။ ။ ငါတို့၌ ကိုးစားရမည့် ခေါင်းဆောင် မရှိသည် မဟုတ်ပါ ။ ဆရာ ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မသည်လျှင် ထင်ရှားကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ။ ဓမ္မသည် ငါတို့၏ ကိုးစားရာ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါ၏ ။ သံဃာသည် ဓမ္မကို ဆရာပြုသဖြင့်သာ ညီညွတ်ပါအံ့
မထေရ် ဝဿကာရ ။ ။ သို့ဆိုသော်လည်း တစုံတဦးသည် တရားဓမ္မကို သံသယ ဝင်လျှင် သံဃာသည် ကွဲပြားလိမ့်မည် မဟုတ်ကုန်လော ?
မထေရ် အာနန္ဒာ။ ။ တစုံတဦးသည် တရားဓမ္မကို သံသယဝင်လျှင် ငါတို့သည် ဤသံသယကို “တရားဓမ္မနှင့် အညီသာ” အပြန်အလှန် ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးပါအံ့။ “တရားဓမ္မကို ကျွမ်းကျင်နားလည်သော” ရဟန်းသည် ဤဆွေးနွေးမှုတို့မှ နေ၍ ကောင်းမွန်သော ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာစေရန် ဦးဆောင်နိုင်ပါအံ့။
မထေရ် ဝဿကာရ ။ ။ မျှော်လင့်ချက်သက်သက် ဖြစ်နေပေသလော ?
မထေရ် အာနန္ဒာ။ ။ များစွာ အန္တရယ်ကြီးမားသော —အဆုံးအဖြတ် ချမှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိသည့် သာသနာ့ ခေါင်းဆောင်တဦး ထားရမည် ဆိုတာထက် — ဤသို့ပဲ မျှော်လင့်မိပါသည်
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ခုနှစ် နှစ်လယ်ကတည်းက မဘသဂိုဏ်း၏ အစည်းအဝေးတွင် “မဘသ ဂိုဏ်းသစ်ကြီး (ဝါ) ဘုန်းကြီးတပ်မတော်ကြီး ဆိုတာဟာ နုိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက နှင့် တစိတ်တဝမ်းတည်း အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရန် ထူထောင်ခြင်း ဖြစ်သည်” ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သော သီတဂူဘုန်းကြီးသည် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော အစည်းအဝေးတွင် တခြားသံဃ ဂိုဏ်းတွေကိုလည်း သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့ (ဝါ) ‘နိုင်ငံတော်’ မှ “တရားဝင်” အသိအမှတ် ပြုပေးဖို့ရန်လိုသည် ဟု ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့သည်မှာ မဆန်းလှပါ။ သီတဂူဘုန်းကြီး၏ နာမည်ကြီးမှုကို ကြောက်ရသလို အစိုးရ ပေးစာကမ်းစာကို အစဉ်သဖြင့် မှီခိုကပ်မြှောင် စားသောက်နေသော မဟနအဖွဲ့က ကောက်ကျစ်စုတ်ပဲ့ လူသိရှင်ကြား အရှက်မဲ့သော မဘသအဖွဲ့ကို မွန်မြတ်သော သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကြီး အဖြစ် “တရားဝင်” အသိအမှတ် ပြုပေးသည့်အပြင် “ရဲရဲတောက် ဘာသာစောင့်အဖွဲ့ကြီး” အဖြစ် ဘိသိက်သွန်းခဲ့သည်မှာလည်း မဆန်းလှပါ။ ဆန်းသလောက် ခု စာရေးသူ ဖော်ပြရမည့် အကြောင်းအရာမှာ ၄င်း သီတဂူ၊ မဘသ၊ မဟန နှင့် ‘ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃအစည်းအဝေး’ စသဖြင့် တို့၏ လုပ်ရပ်သည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ချမှတ်ခဲ့သော မူဝါဒကို လုံးဝ ဆန့်ကျင် နင်းချေဖျက်နေခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ထိုလုပ်ရပ်တို့သည် “တရားဝင်ခြင်း” လုံးဝ မရှိကြောင်း ဆိုတာကို ဖြစ်ပါသည်။
ခု ကျွန်တော် ဖော်ပြခဲ့သော ပထမသင်္ဂါယနာဝင် ရှေးဦးဆုံး မထေရ်ကြီးများ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှု လေးငါးကြောင်းမျှ ကို ဖတ်ရူလိုက်ရလျှင်ပင် လက်ရှိ ‘ထေရဝါဒ’ ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေသူများ ဟု နာမည်ခံထားသော ဗမာပြည် ဘုန်းကြီးတို့တွင် တကယ့်စစ်မှတ်သော “ထေရဝါဒ” အသိဟုလည်း မရှိ၊ ဒါ့ထက်ဆိုးသည်မှာ ၄င်းတို့၏ ကောက်ကျစ်မောက်မာလှသည့် အသိကို ‘ထေရဝါဒ’ အဖြစ် သူတို့ဟာသူတို့ ယုံကြည်၊ အများပြည်သူကိုပါ ဤ ကောက်ကျစ်ယုတ်ညံ့လှသည့် အတွေးအခေါ်၊ အပြုအမူ၊အကြံအစည်တို့ကို “ဗုဒ္ဓဓမ္မ သာသနာတော်ကြီး” အဖြစ် ပုံသွင်းကာ ကိုးကွယ်ခိုင်းနေပါသည်။ ဝီရသူသည် အလွန် ကောက်ကျစ်၏၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရ၏ နှိပ်စက်မှုကို အနည်းအကျဉ်း ခံခဲ့ရဘူး၊ ငယ်ဘဝလည်း နာဘူးသောကြောင့် တခါတခါတွင် “ငါတို့ လိမ်နေကြတာပါ” ဟု နိုင်ငံခြားစာနယ်ဇင်းသမားတို့ကို လွတ်ကနဲ ဝန်ခံ အသိတရားဝင်တတ်ပါသေးသည်။ လူ့လောကအကြောင်းကို ဘာမှမသိသလောက် သူ့ကိုယ်သူ အပြည့်စုံဆုံး အသိတရား ရှိသူဟု ထင်နေသူ သီတဂူ တမူကား ရှေ့က ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသူထက်ပင် အတိုင်းမက ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ၍ အကောက်ကျစ်အယုတ်မာဆုံးသူ ပေတည်း။
အာဏာရှင် နေဝင်းသည် သံဃမဟာနာယက (လက်ရှိမဟန) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံက ရဟန်းသံဃာ မှန်သမျှသည် (ရဟန္တာ၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ ပါမကျန်) မဟန လက်အောက်ခံအဖွဲ့ ဖြစ်သည်ဟု မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ဆိုခဲ့လေသည်။ နေဝင်းနဲ့ အလားတူပါပဲ၊ ယခုအခါမှာ သီတဂူဘုန်းကြီးသည် “ပြောင်းလဲလာသော ခေတ်စနစ်နှင့် အညီ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံ ကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရမည်၊ ‘မဘသ’ အပါအဝင် အသိအမှတ်ပြုသင့်သော အဖွဲ့အစည်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုရမည်” ဟု ဟိန်းဟောက် အမိန့်ပေးလာပါသည်။ သည်ဘက်တခြမ်းက သင်း၏ ဆိုလိုရင်းမှာလည်း အသိအမှတ် မပြုသင့်သော အဖွဲ့အစည်းတို့ကို သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း မပြုရဘူးဟု ဖြစ်ကာ ၄င်း “နိုင်ငံတော်အဆင့်” ဘုန်းကြီးခေါင်းဆောင်ဆိုသူ တို့၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို မခံရသူသည် “ရဟန်းသံဃာ” ဟု မခေါ်ဝေါ်ရဘူးဟု ဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ တနည်းပြောရလျှင် နေဝင်းကတော့ “ရဟန်းဆိုရင် သူပုန်ဖြစ်တတ်လွန်းလို့” ဆိုတဲ့ သံဃာကို (ချေမှုန်းရန်) စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက် နှင့် သံဃနာယကကုို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သီတဂူ ဆိုတဲ့ သည်မိစ္ဆာရဟန်း ကတော့ သံဃာဆိုတာ ငါလို ဥာဏ်ကြီးရှင်မျိုးတွေကသာ (ပုံစံချ အသိအမှတ်ပြုပြီး ဖွဲ့စည်းခိုင်ခံ့ရန်) ဆိုပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု အာဏာရူးနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နေဝင်း၊ ခင်ညွှန့်စသည့် စစ်အာဏာကုိုင်တို့က သံဃာကို ကြုံးသွင်းရန် မဟနကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ခုခါမှာ ဝီရသူ၊ အင်းစိန်၊ မဘသ၊ သီတဂူ နှင့် မဟန စသူတို့၏ “သံဃာ့အာဏာကို ခွဲဝေပေးရေး” လှုပ်ရှားမှုများတွင် ကျွန်တော်တို့ ထင်ရှားသိသာစွာ မြင်နိုင်သော အဓိကအချက်နှစ်ချက် ရှိပါ၏။ ပထမ တချက်မှာ ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို (ဗုဒ္ဓမှ လုံးဝခွင့်ပြုချက် မပေးခဲ့သည့် ) “ရဟန်းခေါင်းဆောင်” အဖြစ် မှတ်ယူလုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတချက်မှာ သံဃာဆိုတာကို ၄င်း ရဟန်းခေါင်းဆောင်ကြီးတွေမှ ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အောက်တွင် ရှိနေမှသာ တရားဝင်သံဃာ ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်နေခြင်း ပါတည်း။
ဤကိစ္စကို ကျွန်တော့် ဖွဘုတ် (Facebook) တွင် လွတ်ကနဲ တုံ့ပြန်ထားသော စာတိုကလေးမှာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းကလေးနဲ့ လိုရင်းတို့ကို ခြုံငုံထုတ်နူတ်ပြထားပါသောကြောင့် အဲသည် စာကလေးကိုပဲ အနည်းငယ်မွမ်းမံပြီး သည်ဆောင်းပါးမှာ ယူလို့သုံး၊ ကျွန်တော်ဖော်ပြ မျှဝေလိုပါသည်။
“ကျနော် တစ်ခုပြောပါရစေ။ ခုရက်ပိုင်း သံဃအဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ပုံဟာ ဟိုလို ဖြစ်ရမယ်၊ သည်လို ဖြစ်ရမယ်လို့ ရှိရင်းမဟနက တစ်မျိုး၊ မဘသက တစ်မျိုး၊ သီတဂူ စသည်က တစ်မျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘုန်းကြီးခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေလို့ ယူမှတ်သူတွေက ပြောလာကြပါတယ်။ သည်လို လုပ်ရပ်တွေဟာ “ရဟန်း” ဆိုတာကို “အဖွဲ့အစည်း” ဆိုတာနဲ့ ပြောင်းပြန် သတ်မှတ်ဖို့ တရားနည်းလမ်းမကျ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓ၏ မူရင်းမိန့်မှာချက် အရ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံ ဆိုတာ ဟိုလိုပုံစံ သည်လိုပုံစံ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ဘုရား၏ နောက်ဆုံး အသေအချာ မှာကြားသတ်မှတ်ချက် အရ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့် ဘုန်းကြီးကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သံဃာထု ရဲ့ ကို်ယ်စားလှယ်၊ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး အမည်ခံယူခွင့်၊ မဏ္ဍပ်တိုင်ပေါ်တက်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။
ဒုတိယ သင်္ဂါယနာတင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာလည်း “တစ်ပါးချင်းသာ ရှိတဲ့၊ တစ်ဖွဲ့တည်းပဲရှိတဲ့” သံဃာကို “တရားဝင်” ကိုယ်စားပြုဖို့ ရဟန်းမောက်မာတွေက ကြိုးစားတဲ့ ကိစ္စကနေ စခဲ့တာဖြစ်ပြီး သည်လိုလုပ်တာကို လုံးဝ တရားမဝင်ကြောင်း အတိအလင်း တားမြစ်ခဲ့သလို ရဟန်းမောက်မာတွေကို ဝန်ခံစေခဲ့ပြီး သာသနာကို ပြန်တည့်မတ်ခဲ့ရပါတယ်။
တပါးချင်း (individual) ကို ဝိနည်းတော်နဲ့ − အကန့်အသတ်မဲ့ လွတ်လပ်ကောင်းမွန်စွာ မိမိဘာသာ ကျင့်ကြံပိုင်ခွင့်−ပေးထားတဲ့ သာသနာမှာ ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး၊ဘယ် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ နေတာကမှ တရားဝင်တယ်ဆိုပြီး အစိုးရအာဏာ နဲ့ ‘ရဟန်း’ ကုို ‘သီးသန့် အဖွဲ့အစည်း’ ဝင် တခု ဖြစ်မှရတယ်လို့ ဆိုပြီး ပြောင်းပြန် ပိုင်းဖြတ်သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့် လုံးဝမရှိပါ။ မည်သည့် အစိုးရဥပဒေ နှင့်မှ “ရဟန်း” ဆိုတာ ငါတို့ သည်လို တရားဝင် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ခွင့်ပြုမှ၊ ငါတို့ နေရာချသလို နေမှ ရတယ်ဆိုပြီး စီမံလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
ဗုဒ္ဓသာသာနာ ဟာ မည်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အာဏာစက်၊ ခွင့်ပြုမိန့်၊ ကိုယ်စားပြု (၍ညွှန်ကြား၊တောင်းဆို) အောက်တွင်မှ မရှိပါ။
ဒါကြောင့် သည်လိုမျိုး သမုဒ္ဒရာကြီးကဲ့သို့ ကျယ်ပြောလွတ်မြောက်တဲ့ ဗုဒ္ဓသာသာနာမှာ ရဟန်းကို “အဖွဲ့အစည်း” နဲ့ “အစိုးရအာဏာ”နဲ့ ကန့်သတ် အသတ်မှတ်ခံရမယ်ဆိုပြီး စည်းဝေးနေတဲ့ ဂိုဏ်ပေါင်းစုံ အစည်းအဝေး ဆိုတာမျိုးရော၊ ဒါမျိုးကို တောင်းဆိုပြနေတဲ့ (ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ စည်းမျဉ်းဓမ္မ ကို ချိုးဖောက်ပြီး) ဘုန်းကြီးခေါင်းဆောင် တက်လုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ဗုဒ္ဒရဲ့ မူရင်း တရားဓမ္မအရ “တရားဝင်” ခြင်း လုံးဝ မရှိကြောင်း ကျွန်တော် ကြေငြာအသိပေးလိုပါတယ်”
အခုတင်ပြခဲ့သလောက် လုိုရင်းအနှစ်ချုပ်မှာ ဗမာပြည်က ‘ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ’ ဆိုသည်တွင် အာဏာလက်ဝယ်ရှိသူက တဆင့်ခံ ခွင့်ပြုထားသည့် ‘သံဃအဖွဲ့အစည်း’ ကနေ၍ ပေးသနားသော တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာလျှင် “ရဟန်းသံဃာ” ဟု ခံယူပိုင်ခွင့်ပေးထားသော စနစ်ယုတ်ပဲ့ကြီး — ဘုရင့်အာဏာက ဘာသာသာသနာ၏ အထက်မှာ လာနေ၊ ဘာသာ သာသနာကို အစိုးရဆိုးတို့က ခေတ်အဆက်ဆက် လိုရာပုံသွင်းထားသော ကိစ္စအပြင် — သည်ဘက် မော်ဒန်ခေတ်မှာ သီတဂူ၊ဝီရသူ စသော ခေတ်မီအမြင်ကျယ် ဘုန်းကြီးဆိုသူတို့သည် ဤ ပုံစံချဘာသာ သာသနာကြီးကို ဘဝင်တလုံးတပ်ပြီး ကြိုးကိုင်ချင် — အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့် အာဏာကို ခွဲဝေရယူရန် မက်မောစွာ ကြိုးစားနေသည့် ကိစ္စ — ဒါမျိုး သာသနာကို ဝီရသူ နဲ့ သီတဂူရဲ့ ဥာဏ်စွမ်းဥာဏ်စအောက်မှာ ရှိတဲ့ သာသနာ ဖြစ်လာစေရန်ဟု ကြိုးစားနေသည့်ကိစ္စကို ဤသူတို့ကနေပြီး သာသနာကြီးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေခြင်း ဟု အထင်မြင်ခံလိုခြင်းတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ မူလ လမ်းညွှန်ချက်အရလည်းကောင်း ၊ မူရင်း တရားဓမ္မအရလည်းကောင်း ဆီလျော်မှန်ကန်သည့် လုပ်ရပ်တို့ မဟုတ်ကြောင်း ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော့် တင်ပြလိုရင်း ပါတည်း။
သည်နေရာမှာ ဝီရသူလိုလူမျိုးသည် သူလုပ်တာတွေ မဟုတ်မှန်းသိသည့် စိုးရွံ့စိတ်များ မကြာခဏ ဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော် လူကဲခတ်ကြည့်သလောက် ရိပ်မိသိရှိပါသည်။ ပြစ်မှုများစွာကို ကျုးလွန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော၊ မိမိသည် ပြစ်မှုတို့ကို ကျုးလွန်ခဲ့သည်ဟု သံသယဝင် သိရှိထားသည့် ဝီရသူမှာ တစုံတခုသော အတိုင်းအတာလောက် အထိ ဝေဖန်စဉ်းစားနိုင်သော အသိဥာဏ်မျိုးရှိ ၊ တချိန်ချိန်မှာ ၄င်းသည် နောင်တအကြီးအကျယ်ရ ဝန်ခံနိုင်ပါသည်။ သီတဂူလို လူမျိုးကတော့ ဒါမျိုး ဝေဖန်နိုင်သော အသိဥာဏ်မျိုးလည်းမရှိ ၊ လူပြိန်းသက်သက်ဖြစ်သည့်အပြင် ၄င်းတွင် သားရဲတိရစ္ဆာန် အခြေခံမူလစိတ် (Primitive instincts) လွှမ်းမိုးသူ ဖြစ်ရကား ထုိုသူမျိုးသည် “မှားယွင်းယုတ်မာသော အယူဝါဒ အပြုအမူ” တို့ကို “ဗုဒ္ဓတရား” ဟု အသိအမှတ်ပြု ဖြန့်ဝေဖို့ အားထုတ်ဖို့ရန် မရှက်မကြောက်သူ ပါတည်း။ သို့သော်လည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာ သူသူငါငါတို့သည် “ထောင်ထွက် မွတ်စ်ဆလင်မုန်းတီးရေး လုပ်တဲ့ ဝီရသူသာ ဆိုးတာပါ၊ ဗမာလူမျိုး ကောင်းရာကောင်းကျိုးကို ပရဟိတ အလုပ်တွေကို တစိုက်မှတ်မှတ် လုပ်တဲ့ သီတဂူကတော့ သူ့စိတ်ရင်း မဟုတ်ပါဘူး” ကိုးကွယ်ရာ လောက်လောက်လားလား မရှိခဲ့သော ဗမာပြည်တွင် သူတို့ စိတ်မှန်းကလေးနှင့် လှမ်းကြည်ညိုခဲ့ရသော “သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး” ဟူသော မိမိ၏ “အတ္တပုံရိပ်ကလေး” ပျောက်ပြယ်သွားမှာ စိုးရိမ်၊ ဤ လူယုတ်မာ တစောက်ကန်းအတွက် ဖြေတွေး တွေးပေးတတ်ပါသည်။
ဒါကိုလည်း ကျွန်တော့် အနေဖြင့် အပြစ်မတင်လိုပါ။ သို့သော် ကျွန်တော် ထောက်ပြဝေဖန်လုိုသည့် အချက်မှာ ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ စဉ်းစားသုံးသပ်စရာ အချက်အလက် မပြည့်စုံဘဲနှင့်၊ မကြာမကြာဆိုသလိုလည်း ဒါ့ထက်ဆိုးဝါးတတ်သည်မှာ အချက်အလက်များ ကျွန်တော်တို့တွင် လုံးဝ ပျောက်ဆုံးကင်းမဲ့လျက်ရှိသော အခြေအနေမျိုးဖြင့် တခုခုကို ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်တတ်ရပါသည်။ နောင်ခါမှာ ကျွန်တော်တို့တွင် စဉ်းစား သုံးသပ်စရာ အချက်အလက်တို့ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရရှိလာခဲ့သော် ငါတို့သာ ယခုကဲ့သို့ အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိနားလည်ထားခဲ့မိပါလျှင် ငါတို့ ဒါမျိုးကို ယခင်က ရွေးချယ်လိုက်မိမှာ မဟုတ် ဆိုသော သဘောကို အသူသည် တုံ့ပြန်ငြင်းခုံနိုင်ပါအံ့။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဝေဖန်ရာတွင် (ခုခါမှာ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ နည်းပေးလမ်းပြ အမြစ်တွယ် ခုိုင်မာလာပြီဖြစ်တဲ့) ဘုရားအာဘော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လိမ်ညာလှည့်ဖြားတဲ့ ဘုန်းကြီးကဝေ အတတ်တွေ၊ အပြုအမူတွေဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာကို ပြလိုရင်းသာ ဖြစ်ပြီး နောင်ခါမှာ ပရိသတ်အနေဖြင့် ဝီရသူ၊ သီတဂူ ရယ်လို့မှမဟုတ်၊ မည်သို့သော ရဟန်းဟာ တရားဓမ္မနှင့် အညီ မကျင့်ကြံ၊ အစစ်အမှန် ရဟန်းမဟုတ် ၊ ကိုးကွယ်ရာလို့ မသတ်မှတ်နိုင် ဆိုတာကို အချက်အလက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပိုမိုရရှိ၊ ချင့်ချိန်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကို သုံးသပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဌာ ကူညီပေးဖို့သာ ကျွန်တော့်စာ၏ လိုရင်းပေတည်း။
အခြေခံသားရဲတိရစ္ဆာန်စိတ် (Primitive instincts) ဆိုတာ အိပ်စားကာမ ဤသုံးဝသာ သိသောစိတ်လို့ မဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုရင်းမှာ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ လူ့သဘာဝတွင် အခြေခံအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော “အခြေခံ စိတ်ခံစားမှု” (basic instincts) တို့ကို ရှက်ကြောက်ဝေဖန်တတ်သော အဆင့်မြင့် အသိတရား (higher cognitive functions) တို့ဖြင့် ထိန်းကွပ်ပဲ့ပြင်မှု မရှိဘဲ ၄င်းအခြေခံ စိတ်ခံစားမှု အတိုင်း (တိရစ္ဆာန်တို့အတိုင်း) လိုက်လံ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့သည် Primitive instincts (ဝါ) အခြေခံသားရဲတိရစ္ဆာန်စိတ် ဖြင့် ပြုမူသော အပြုအမူ၊ တနည်းအားဖြင့် သားရဲတိရစ္ဆာန် အပြုအမူဟု ခေါ်တွင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်း “မိမိ၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုသာ ပဓာန” ဆိုသော သဘောနှင့် အထိန်းအကွပ်မဲ့စွာဖြင့် အခြေခံမူလ အတ္တစိတ်အတိုင်း အရှက်အကြောက် ဆင်ခြေတုံတရားမရှိ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာ မှန်သမျှကို Primitive instincts လို့ ခေါ်ဝေါ်နိုင်ပါသည်။ တခု သတိထားအပ်သည်မှာ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လစ်ဘရယ် လူ့ဘောင်စနစ် တို့ဆိုတာဟာ ဤ primitive instinct တို့ကို ပြည်သူပြည်သား တစ်ဦးချင်းမှ မိမိကိုယ်ကို အသိတရားတိုးမြှင့် ထိန်းချုပ်ပြုပြင်နိုင်ရန် ဦးတည်ရည်ရွယ်ပြီး လုံးစည်းစနစ်ကို ဖော်ဆောင်သော လူ့ဘောင် (Totalitarian system) တို့ကမူ ပြည်သူပြည်သားများတွင် ၄င်း “အခြေခံ စိတ်ခံစားမှု” တို့ လွှမ်းမိုးဖြစ်ပေါ်စေရန် တမင် ပုံစံသွင်းကာ၊ ဒါ့ထက်ပြင် ဆိုးဝါးလှသည်မှာ ထိုလုံးစည်းလူ့ဘောင်တို့သည် သားရဲတိရစ္ဆာန်စိတ် လွှမ်းမိုးသူတို့ကိုသာ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့် ပေးခြင်း၊ ဖြစ်လာမြဲ ဖြစ်ခြင်း ဟူသည့် အစဉ်အလာဆိုးတို့ ရှိပါသည်။ တကယ်တော့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်း တလျှောက်လုံး ကို ရုိုးရိုးလေး သုံးသပ်လျှင် လူသားသည် မိမိ၏ primitive instinct ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ၄င်းနှင့် ဘတပြန် ကျားတပြန် နဘမ်းလုံးနေရသော ဖြစ်အင်ဟုလည်း ရူနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ အခြေခံ သားရဲတိရစ္ဆာန်စိတ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓတရားနှင့် ပြောမည်ဆိုလျှင် ပဌာန်းတရားတော်လာ မူလရေသောက်မြစ်စိတ် သုံးမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းတုို့မှာ lust – ငါမှငါ၊ ငါ့ဥစ္စာ၊ ငါ့ကျွန်၊ ငါ့သခင် စသော အုပ်စီးလိုသည့် ခက်ထန်သည့် အာသီသ)၊ malice – တစ်ဖက်သူကို မုန်းတီးရန်လိုမှု၊ delusion – ရှေ့စိတ်နှစ်မျိုးကို တရားမှန်ကန်ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ခံသော အသိတရား (ဝါ) ရှေ့စိတ်နှစ်မျိုးကို ထိန်းကွပ်ပြုပြင်ရမည်ကို မသိမေ့လျော့သော မောဟတရား၊ ဤ သုံးမျိုးပါတည်း။ တနည်းအားဖြင့် အကုသိုလ်စိတ်မှန်သမျှသည် မောဟကို အခြေခံသည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်လည်း ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ဟာ မောဟ လွှမ်းမိုးရင်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အသိတရားများဖြစ်သော ရှက်ကြောက်ထိန်းကွပ်ရန် ဟူသော ဆင်ခြင်မှုသည် အာရုံမှာမသက်ဝင်၊ မိမိ၏ အုပ်စီးလိုမှု ၊ ရန်လုိုမုန်းတီးမှုတို့ကို အတောမသတ် အကောင်အထည်ဖော်တတ်သောကြောင့် ပါတည်း။
မေ့လျော့မှုဟု ကျွန်တော်တို့ လွယ်လွယ်ခေါ်သော မောဟကို အဘိဓမ္မာသဘောအားဖြင့် ထပ်ပြီး နှစ်ခြမ်းခွဲလို့ ရပါသေးသည်။ ပထမ တခြမ်းမှာ “အရှက်အကြောက်မရှိခြင်း” (non-fear) နှင့် နောက်တခြမ်းမှာ “ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု =အခြေခံမူလစိတ် လောဘဒေါသတို့ဖြင့် လွှမ်းမိုးလုပ်ဆောင်သည် ကို မှန်သည်ဟု မထီမဲ့မြင် အတည်ပြုခြင်း” (disrespect) တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အဘိဓမ္မာကောသကျမ်း အလို ရှိရှိသမျှ အကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည် ဤ မောဟနှစ်ပါးကိုသာ အခြေခံပါသည်။ ဤမောဟနှစ်ပါးကို အဆင့်မြင့် အသိတရား (ခန္တီ၊ ကရုဏာ၊ သစ္စာ စသဖြင့်) တို့ဖြင့် ထိန်းကွပ်ခြင်းမရှိ ၊ သည်မောဟနှစ်ပါး နဲ့ လုပ်တာဟာ တရားသည်ဟု ယူလျှင် ကမ္ဘာအဝှမ်း အကုသိုလ်စိတ်တွေ ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း အကုသိုလ် အပြုအမူတွေ မျိုးစုံ လွှမ်းမိုးပြန့်ပွားသွားပါလိမ့်မည်။ တကယ်တော့ ခေတ်ပေါ်စိတ်ပညာပိုင်းက မီးမောင်းထိုးပြသော sense of insecurity (ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလုံခြုံသောစိတ်) နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကလာသော လူသားတိုင်း၏ မူလဘူတ စိတ်အခြေခံတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု (disrespect (ဝါ) violence) တို့သည် သဘောတရား များစွာ ဆင်တူပါသည်။
ဤ အခြေခံသဘောကို ပြသပြီးနောက်တွင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် သီတဂူဘုန်းကြီးကို “အခြေခံသားရဲ တိရစ္ဆာန်စိတ် လွှမ်းမိုးသူ” ဟု ပြောရခြင်း အကြောင်းရင်းတို့ကို ရှင်းပြနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့် ပုဂ္ဂလ တစ်ဦးချင်း အနေနှင့်ကတော့ လက္ခဏာပညာကို အတိုင်းအတာ တစုံတရာအထိ ကျွမ်းကျင် လေ့လာတတ်မြောက် နားလည်ခဲ့သော ကျွန်တော်သည် သီတဂူ၏ လက်ဖဝါးက လက္ခဏာကို တချက်မြင်လိုက်ရုံနှင့် တန်းသိပါသည်။ ၄င်းသည် မူလဘူတ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်စိတ် (disrespect/ violence) လွှမ်းမိုးသူ တဦးဖြစ်ပြီး ဒါကြောင့်လည်း စစ်အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်စိတ်ကို အသားပေးသော ပုံစံချဒီဇိုင်း အရ စင်ပေါ်ရောက်လာရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် တပ်အပ်မပြောနိုင်သော်လည်း စစ်အာဏာကိုင်တို့ ဖက်တွင် လက္ခဏာပညာကို အထူးကျွမ်းကျင်သူတို့ ရှိနိုင်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေ၏ ကြန်အင် လက္ခဏာတို့ကို ကြည့်ကာ “သည်ကိုယ်တော်ကဖြင့် လက္ခဏာဆိုးလွန်းတယ်ဟ၊ သူ့ကို ထိပ်တန်းဖြစ်အောင် တင်ပေးလိုက်” ဟု အရင်ကတည်းကလည်း ကြိုလုပ်ထားလည်း လုပ်နိုင်ပါသည်။ လုံးစည်းနိုင်ငံတို့တွင် “ပုံစံချခြင်း” ဆိုသည်မှာ ပုံပြင်လှလှကလေးတွေ ပြောနေသလားဟု ထင်ရလောက်အောင် အမျိုးမျိုး အဆန်းတကြယ် ကြံဆောင်တတ်ကြပြီး ဒါမျိုးဟာလည်း မလုပ်ထားဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါ။ သာသနာ တစ်ခုလုံး သူ့လက်အောက်ခံ အဖြစ် ထိန်းချုပ်ရန်၊ ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း ဆိုတာမျိုးကို ဦးနှောက်ကောင်းသော လူတွေ ဝင်လာခြင်းမရှိစေရန် စီမံခဲ့သော အစိုးရအတွက်၊ ဗေဒင်ယတြာ ယန္တရားဆိုတာကို ၄င်းတို့ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက် ယုံကြည်ကိုးကွယ်သော စစ်အာဏာကိုင်တို့သည် လက္ခဏာ ဖတ်ပြီး အယုတ်မာဆုံး လူကို နာမည်ကြီးအောင် လုပ်ပေးဖို့ ပင့်တင်ပေးဖို့ ဆိုတာဟာလည်း ခက်လှသော ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် သိပ္ဗံနည်းကျ မျက်မြင်အထောက်အထား လက်ဆုပ်လက်ကိုင် မရှိပေမယ့် ဒါမျိုးကိစ္စဟာလည်း ဖြစ်နိုင်လောက်သည် ဟု အခြေအနေ နှင့် ရလဒ်တို့ကိုယှဉ်ထိုး ၊ ရလဒ်ကနေ ပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကာ ကျွန်တော်ယူဆမိသည့် အတိုင်း၊ နောက် ကျွန်တော်ပြောလိုသည့် Primitive instincts လွှမ်းမိုးသူတို့သာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှုဆိုတာကို လေးနက်စေလိုသည့်အတိုင်း ဒါမျိုး “လူရွေးပွဲ” အကြံအစည်မျိုးကိုလည်း ထည့်ယူစဉ်းစားသင့်သော အချက်တစ်ချက် အဖြစ် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ ဂျာမနီမှာနာဇီခေတ်မှာလည်း ဟင်းမလား သည် နာဇီလူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေကို ကြန်အင်လက္ခဏာကို ကြည့်၍သာ ရွေးချယ်ခဲ့သော သမိုင်း အထင်အရှား ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
အခုတခါ ကျွန်တော်သည် တရားဓမ္မနည်းလမ်းအားဖြင့်ပင်လျှင် သီတဂူပုဂ္ဂိုလ်၏ အခြေခံစရုိုက်လွှမ်းမိုးမှုကို အခိုင်အမာ ပြုရပါအံ့။ ဘဝအတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂဝိဇ္ဖာစသော အတတ်မျိုးတွင် အာရုံရှိသူသည် ဤပုဂ္ဂိုလ်၏ အသံကို ကြားရုံနှင့်ပင် ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ အခြေခံမူလ သားရဲတိရစ္ဆာန်စိတ်များ အပြင်းအထန် လွှမ်းမိုးနိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း အလွယ်တကူ သိနားလည်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအများအနေဖြင့် ရူပ်ထွေးစရာ ဖြစ်ရသည်မှာ ဤသူ တဦးတည်းကပင် အဆင့်အတန်း အလွန်မြင့်လှသော အယဉ်ကျေးဆုံး ဗုဒ္ဓတရားတို့ကို အသံနေအသံဝါကြီးနှင့်၊ ပါဠိကမ္မဝါတွေ သုံးကာ ဟောပြောရွတ်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အဆင့်မြင့်တရားကို ဟောပြောရွတ်ပြသူသည် ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အဆင့်မြင့်အသိတရား ရှိသူဟု မှတ်ရမပေလိမ့်။ ဒါမျိုး မဟုတ်ပါ၊ ဤသူဟောသော တရားသည် “ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အဆင့်မြင့်တရား” မဟုတ်သလို ဟောပြောသော ဤသူသည်လည်း ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အဆင့်မြင့်အသိတရား ရှိသူ မဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဆိုနိုင်သနည်းဆိုသော် ဗုဒ္ဓဝါစန (ဝါ) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုယ်တိုင် ဟောကြားခဲ့သော နူတ်ထွက်စကားကို နာယူနားလည်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဤသို့ တပ်အပ် ဆိုနိုင်ပါသည်။ အင်္ဂုတ္တရ နိကာယ် ၃.၃၇ လာ “ဘုရင်တွေ ဟောတဲ့တရား” ဟု အမည်ရသည့်သုတ္တန်ကို ငါတို့ တခဏမျှ နာယူကြည့်ကြပါစို့။
“ရဟန်းတို့၊ အတိတ်တခါက နတ်တို့၏ ဘုရင်ဖြစ်သူ သိကြားမင်းသည် တာဝတိံသာနတ်ရွာက နတ်ပြည်သူ နတ်ပြည်သားတို့ကုို ဤသို့ တရားဟောလေ၏
တစ်ဆယ့်လေးရက်၊ တစ်ဆယ့်ငါးရက် လပြည့်လကွယ်
ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ဆိုပေမယ့်လည်း နတ်တို့ကို အုပ်စိုးရသော သိကြားမင်းသည် ဆိုးဝါးစွာ တရားကို ရေရွတ်နေခြင်း ဖြစ်၏၊ ဤသို့ ရေရွတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော ရေရွတ်ခြင်း မဟုတ်။
ဘိက္ခုတို့၊ အသို့နည်း။ အဘယ်ကြောင့် ကောင်းသောလက္ခဏာ ရှိသည့် စကားကို ဆိုပါလျက်နှင့် ဆိုးဝါးသော ရေရွတ်ခြင်းဟု ငါဘုရား ဆိုရပါသနည်း။
သိကြားမင်းသည် အုပ်စီးလိုမှု လောဘ၊ မုန်းတီးစက်ဆုပ်မှု ဒေါသ၊ ရှက်ကြောက်ရမှန်း မသိသော မောဟတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းကာ တရားကို ဟောပြော၏။ ဤသို့ အခြေခံစိတ်ရင်းထားရှိမှု မစင်ကြယ်သူသည် တရားဓမ္မ ကို (အများသူငါ ရှေ့မှောက်) ပြောဆိုရေရွတ်ရန် မတင့်တယ်သောကြောင့် ပေတည်း”
တကယ်တော့ တရားဓမ္မဆိုတာ စာသား စကားချည်းသက်သက်သာ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အသံသြဇာ အကောင်းဆုံးလူတွေနဲ့ အသံသွင်း ဖိုင်တွေလုပ်ပြီး ပလေယာတွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေ၊ တီဗွီတွေကို တသက်လုံး ဟောပြောခိုင်းနေရုံပေါ့။ တကယ်တော့ “တရားဓမ္မ” ဟုတ်လား၊ မဟုတ်လား ဆိုတာကို သတ်မှတ်ဖို့ ဆိုတာကိုက စာသားထက် ဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီး တရားကို အမှန်တကယ်ကြည်ညို၊ ထိုးထွင်းနားလည်မှု နဲ့ စိတ်သဘောထား ဖြူစင်မှု အပေါ်မှာ မူတည်တာပါ။ သည်လိုပါပဲ၊ အခြေခံမူလစိတ်တွေ အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးပြီး ဟောပြောနေတဲ့ သီတဂူ ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ စာသားတွေဟာ ဆိုးဝါးသော ရေရွတ်ခြင်းတွေ ပါ၊ တရားဓမ္မလို့ပင် သတ်မှတ်လို့ မရတဲ့ ဟောပြောမှုတွေပါ။ တရားဓမ္မကို ပြောဆိုရေရွတ်ဖို့ရန် မထိုက်တန်လောက်အောင် အခြေခံကောက်ကျစ်စိတ်ထားရှိနေသူက ဗုဒ္ဓတရားတွေကို ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုပ်ပြီး သူလိုတဲ့နေရာမှာ ခုတုံးလုပ်အသုံးချလို့ “ဗုဒ္ဓတရားတော် အစစ်အမှန်” သိက္ခာများစွာကျရတဲ့ အဖြစ်ရယ်ပါ။
သည်မှာလည်း မေးစရာ မေးခွန်းတခု ရှိပါသည် “လူအများ မသိမတတ်တဲ့ လက္ခဏာပညာ၊ အစိုးရ လုပ်ကြံမှုစတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို မသုံးနဲ့၊ သီတဂူဘုန်းကြီးမှာ အခြေခံမူလစရိုက်တွေ လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကို လူအများသိသာ ထင်ရှားအောင် နင်ဖော်ပြနိုင်မလား”
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်အသေအချာ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လွယ်ကူစွာ မြင်နိုင်သော တချက်မှာ အခြေခံသားရဲတိရစ္ဆာန် အမူအကျင့် ကြီးစိုးနေသော မဘသ အဖွဲ့ကို ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်က နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ဂုဏ်တင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၄င်းမှ မနှစ်မြို့သည့် ‘ရန်သူ လူယုတ်မာ အကြံအစည်ကောင်များ’ ကို လူရှေ့သူရှေ့ အရှက်အကြောက်မရှိ တိုက်ခိုက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကို ၂၀၁၃ နှစ်လယ်ပိုင်း မဘသ အဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် ၄င်းပြောကြားသော မိန့်ခွန်းတွင် အထင်အရှား နားဆင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ (http://www.youtube.com/watch?v=njFM2wioiAU)
ဤအစည်းအဝေးတွင် စကတည်းက ယဉ်ဆိုသလို ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ဂိုဏ်းသစ် မဘသ အဖွဲ့ကြီးကို ဘုရားရှင်ခေတ်က အဂ္ဂသာဝက နှစ်ပါးနှင့်ပင် မနိုင်းအပ် မနိုင်းရာ ခိုင်းနိုင်းခဲ့ပါသည်။ “ရဟန်းသစ်များဖြစ်သော ရှင်သာရိပုတြာ နှင့် ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့သည် လဝက်မျှသာ ရဟန်းအဖြစ်ကို ရကြသေးသော်လည်း အားလုံးကို ကျော်ကာ ဘုရားက ခေါင်းဆောင် “ရာထူး” ပေးလိုက်ပါသည်၊ အဂ္ဂသာဝကကြီး နှစ်ပါးဟာ သူများထက်စွမ်းလို့ လူသစ်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရယူပိုင်ဆိုင် စံစားခွင့် ရှိပေသပေါ့၊ သည်လိုပဲ အရှင်ဘုရားတို့ သံဃာအားလုံးသည် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ မဘသအဖွဲ့သစ်ကြီးကို သံဃာကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ”
ကျွန်တော်တို့ ကြားလည်းကြားသာ၊ မြင်လည်းမြင်သာပါ၏ ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်တွင် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့စွာဖြင့် အုပ်စီးလိုသော အခြေခံလောဘစရုိုက်များ ထူပြော၊ “ရာထူး” ရူးနေသည်မှာ အထင်းပါတည်း။ ဘုရားသားတော်ဆိုသူက ဒါမျိုး ရာထူးရူးနေခြင်းမှာ သင်းကသာ မရှက်တတ်ပေမယ့် ရှက်ကြောက်ဆင်ခြင်တတ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် အလွန် ရှက်ဖို့ ကောင်းသော ကိစ္စပါတည်း။ တကယ်တော့ “ရှက်ကြောက်ခြင်း” ဆိုတာသည် လက်ရှိဗမာပြည်ကုို ဘာလို့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာ နှစ်ရာစုဝက်မက လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခြင်း နှင့် များစွာ သက်ဆိုင်ပါ၏။ တကယ်တော့လည်း လုံးစည်းစနစ်တစ်ခု (totalitarianism) ၏ အသက်သည် မရှက်မကြောက်သူ ၊ ဟီရိသြတ္တပတရား ကင်းမဲနေ့သူတို့ကို နေရာပေးထားတတ်စမြဲ ပါတည်း။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လုံးစည်းစနစ် ခိုင်မြဲဖို့ကိစ္စမှာ အရှက်အကြောက် ကင်းမဲ့သော စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေကို အသိတရားမရှိ လုပ်ဆောင်ပေးသူတို့ ရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ ဒါကြောင့် လုံးစည်းစနစ်ကို ဖော်ဆောင်သော အစိုးရမင်းတို့သည် — အခြေခံ မူလစရုိုက်လွှမ်းမိုးသူ၊ တနည်း အရှက်အကြောက်တရား ကင်းမဲ့နေသူတို့ကို — လူ့ဘောင်၏ ထိပ်တန်းသို့ ရွေးချယ်ခေါ်ငင်တတ်သလို၊ တဖက်တွင် ထိုသူမျိုး ကိုယ်တိုင်တို့ကိုကလည်း လုံးစည်းခေါင်းဆောင်အာဏာကိုင်တို့ စိတ်ကျေနပ်လောက်အောင် အရှက်အကြောက်ကင်းမဲ့စွာ လိုက်နာလုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်သာ ထိပ်တန်းနေရာကို လိုလိုလားလား ဝင်ယူရဲကြပါ သတည်း။
ငါတုို့ သေချာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့၊ “မဝေဖန်ရဘူး”၊ “မငြင်းခုံရဘူး”၊ “ဆရာဟာ ဘဝအရှင်သခင်”၊ “ငါတို့ပြောတာ ၏သည်မရွေးမှတ်” ဟူသော သဘောအယူတို့ လွှမ်းမိုးနေသော ဗမာပြည်က အစိုးရဘုန်းကြီးစာ ပညာရေးတွင် ဝင်ရောက်ပြီး ခေါင်းဆောင်နေရာယူသူတို့သည် ဘယ်လိုလူမျိုးသာ ဖြစ်နိုင်ပါသနည်း။ ၄င်းလူတို့သည် ကောက်ကျစ်စွာ အောက်တန်းတမင်ကျအောင်လုပ်ထားသော ပညာရေးကို လိုက်နာ အတည်ပြုပေးနေသည့် ပုလင်းကွဲ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာ ဖြစ်လိမ့်ပေမပေါ့။ ဤသို့သော လူ့ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့ ပညာရေးမျိုးတွင် မိမိသည် အများအပေါ်တက်၍ “အောက်တန်းစားပါမောက္ခ” ကြီးလုပ်ကာ “ဘုန်းကံကြီးသူ” ဟု သာယာနေသူသည် အောက်တန်းစား အခြေခံစရုိုက် လွှမ်းမုိုးသူတို့သာ ဖြစ်လိမ့်ပေ မပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ ၊ ကျွန်တော်ပြောလိုရင်းမှာ ဤသို့ အောက်တန်းစားလူတွေကို ဘုန်းရှင်ကံရှင် ပါမောက္ခကြီးများ အဖြစ် ဒီဇိုင်းချကြံစည်ထားသော ပညာရေးမျိုးကို အမှန်တကယ် ပညာဥာဏ် ထက်မြက်နိုးကြားသူတို့ဟာ ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းလိမ့်မှာ မဟုတ်သလို၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းမိပြန်လျှင်လည်း လူကောင်းလူတော်တို့ မည်သည် ဤပညာရေးမျိုးကို အနှေးနဲ့ အမြန် ဖဲခွာဖို့ ကြိုးစားပါလိမ့်မည်၊ ကြိုးကိုကြိုးစားလိမ့်မည်သာ ဖြစ်ပါ၏။
တနည်းတဖုံအားဖြင့် စိတ်ပညာအလို လိင်စိတ်ကို အခြေခံသော၊ ငါနှင့်ငါသာ နိုင်းစရာဟု မပြေငမ်းငမ်း မာန်ကြွပျော်မြူးခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်အခေါ် lust ၊ ဗုဒ္ဓဓမ္မ အလိုအားဖြင့် “အာသာလောဘ” ဟူသော အဓမ္မအခြေခံမူလစိတ်တို့ ထင်းထင်းကြီး ထင်ပေါ်နေမှုသည် သီတဂူဟောကြားသော တရားအတော်များများတွင် အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါ၏။ ၄င်း ပုဂ္ဂိုလ် ဟောကြားသာ တရားအများစုသည် “ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဘယ်လိုဘယ်ဝါ သူများထက် သာထူးမြင့်မြတ်တာ = lust (လောဘ) ၊ ဘယ်လုိုကောင်တွေကတော့ဖြင့် ဘယ်လို နိမ့်ကျအောက်တန်းကျတာ = hatred (ဒေါသ)” ၊ ဒါ့အပြင် ၄င်း လောဘစိတ် ဒေါသစိတ်တို့ကို သာယာလျက် ဟောပြောနေခြင်းတို့ဟာ ကြားတတ်ကြည့်တတ်သူတို့ အတွက် ပေါ်လွင်လွန်းပါ၏။
နောက်ပြီးလည်း ခက်သည်မှာ ဒါမျိုး ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် လောဘ ဒေါသစိတ်တို့ဖြင့် ဝင့်ကြွားမာန်မြောက်နေခြင်းကို ရှက်ရကြောက်ရမှန်း မသိတာအပြင်၊ လောဘဒေါသကင်းငြိမ်းကြောင်းကို ရည်ရွယ်ကာ ပေါ်ပေါက်လာသော — ၄င်းလို မစင်ကြယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှ ဟောဆိုဖို့ရန် မထိုက်တန်သည့် ဗုဒ္ဓတရားတို့ဖြင့် — ၄င်း၏ အခြေခံ လောဘဒေါသစိတ်တို့ကို ရောပူးလွှတ်ကာ ပရိသတ်ကို ဖြန့်ဖြူးနေခြင်း ပေတည်း။
ငါတုို့ သေချာ စဉ်းစားကြပါစို့ “ငါတို့ဟာ ဗုဒ္ဓတရားကို သိသည့်အတွက် တခြားကောင်တွေထက် ငါတို့သည် ပိုပြီး လောဘဒေါသ ကင်းငြိမ်း သာလွန်မွန်မြတ်သူတို့ဖြစ်သည်” ဟူသော တရားစကားမျိုးသည် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တစုံတဦးကို လောဘ ဒေါသ လျော့ပါးစေရန် မရှိပါ။ “I desire peace” (ငါသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုိုလားသည်) ဟု ဆိုသူသည် “လိုချင်နေသရွေ့” ဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းနိုင်၊ ဤသူသည် လူလိမ်ပေတည်း။ ဒါ့အတူ “ငါဟာ အမြတ်ဆုံး ဗုဒ္ဓတရားကို သိလို့ တပါးသူတွေ အားလုံး ထက် သာလွန်မွန်မြတ်သူ”ဟု စွဲယူနေသည့်သူက ဟောသော — ဤ စိတ်အောက်တန်းစားနှင့် lust ထန်သောလူက — လျှပ်ပေါ်လော်လီပြသော‘အမြတ်ဆုံး’ ဗုဒ္ဓတရားဆိုတာသည် — အောက်တန်းစား လူလိမ်တဦး၏ အတ္တဖွင့်ထုတ် တရားသာ ဖြစ်ပါ၏။
ဒလိုင်းလားမား၏ မည်သူတဦး တယောက်ကမှ အနှစ်မရှိခြင်း (သုညတာ) ကို ခံယူနားလည်ကာ ရင့်ကျက်ပြည့်ဝငြိမ်းချမ်းသော မျက်နှာ နှင့် ငါနှင့်ငါသာ နိုင်းစရာဟု မိုးမမြင်လေမမြင် ဘဝင်ဟပ်နေသော သီတဂူပုဂ္ဂိုလ်ကုို နိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ သင်္ကန်းဝတ်တာချင်း အတူတူ၊ ကတုံးတုံးထားတာချင်း အတူတူ၊ ဘုရားသားတော်လို့ ခံယူထားတာချင်းအတူတူ၊ အသက်အရွယ် ခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ချင်းလဲ အတူတူ ကြည့်ရူမိသူတို့မှာ ဘာများကွာပါသနည်း။ ဒလိုင်းလားမား၏ မျက်နှာသည် lust ကို ပယ်သတ်ထားသော မျက်နှာချမ်းမြ ရွှေလဝန်းကြီး ဖြစ်ပါ၏။ သီတဂူဘုန်းကြီး၏ မျက်နှာမှာ lust တွင် ပျော်ရွှင်၊ ဘဝင်မှာ ဟုန်းဟုန်းမီးတောက် နေသော မျက်နှာမည်းမည်း ပြာပူခဲကြီး ဖြစ်၏။ ထိုသူနှစ်ဦးလုံးသည် လူတုိုင်းကို “အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ” လို့ပဲဟောပြောမှာ ဖြစ်ပါ၏။ ဒါပေမယ့် ဒလိုင်းလားမားက ပြောသော “အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ” ဟာ ကိုယ်တော်ကြီး၏ အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟ မူလစိတ်အခြေခံကောင်းမှ ထွက်သော တရားဓမ္မ၊ လူသားတို့၏ အသိတရား ငြိမ်းချမ်းဖို့ရန် လိုလားသော စေတနာ အစစ်အမှန် ဖြစ်၍ သီတဂူ ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်က ပြောနေသော ‘အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ’ မှာမူ ၄င်း၏ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ မူလစိတ်ကို အခြေခံကာ ၊ ဤသို့ လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို အများကို ဟောဆိုပြရခြင်းသည် မိမိ၏ အများထက် မြင့်မြတ်သာလွန်ကြောင်း ခုတုံးသက်သေကြီး အဖြစ် မှတ်ကိုင် မိန့်ကြားနေသည့် မစင်ကြယ်သော တရားပါတည်း။
“ကုလားတွေကို သည်းခံကြပါ၊ ဒါပေမယ့်” ဟူသော သီတဂူပုဂ္ဂိုလ်၏ စကားမှ “သည်းခံကြပါ” ဟူသော စကားသည် စာသားခြင်းတူပေမယ့် ဗုဒ္ဓဝါစန မဟုတ်။ အစအလယ်အဆုံးကောင်းသော ဗုဒ္ဓဝါစန ဟူသည် ခြွင်းချက်မရှိ၊ “ကုလားတွေကို” ဆိုပြီး သီးသန့်ခွဲထုတ်ဖို့လည်း မလို။ “ဒါပေမယ့်” ဟုလည်း ဆက်ရန် မရှိ။ ပညာမဲ့သူ ၊ ဖောက်ပြန်သူ၊ အခြေခံ သားရဲတိရစ္ဆာန်စရုိုက်ကို အမှန်တရားဟု အတည်ပြုပေးလိုသူ၊ တရားဓမ္မကို ဟောဆိုရန် မစင်ကြယ်သူ က ၄င်း၏ အခြေခံစိတ်ယုတ်မာတွေမှာ မင်းမူနေသော “တရားတု တရားမှား” (လောဘမူစိတ် ၊ ဒေါသမူစိတ်၊ မောဟလွှမ်းစိတ်) တွေကို တရားစစ်အဖြစ် ယောင်ဆောင်ဖြန့်ဖြူးနေသော ဖြစ်စဉ်ဟု ကျွန်တော်တို့သည် အသေအချာ နားလည်သိမြင်နိုင်ပါ သတည်း။
Ko Nyo Tun burmaenlightenment@gmail.com
လာအိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ လေယာဉ်ပျက်ကျ – Laos Deputy PM Douangchay Phichit ‘dies in plane crash’
By burmamuslim on May 17, 2014 | Leaveacomment
လာအိုနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး အပါအ၀င် ထိပ်တန်းစစ်ဘက် အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါလာသော စစ်လေယာဉ်တစ်စီး နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် ယနေ့ မနက်ပိုင်းက ပျက်ကျသွားခဲ့ သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါင်ချေ ပိချစ် နှင့် ဇနီး အပါအ၀င် လူနှစ်ဆယ် လိုက်ပါလာသော အဆိုပါ လေတပ်ပိုင် လေယာဉ်သည် လာအိုမြို့မှ မိုင်သုံးရာကျော်အကွာ ဇင်းခေါင်းပြည်နယ်တွင် ပျက်ကျ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လူအသေအပျောက်စာရင်းကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်း လာအိုစစ်ဘက်က ပြောကြားသည်။
အိမ်နီးခြင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်ကမူ အဆိုပါ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွင် လူငါးဦး သေဆုံးကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
လေယာဉ်ပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသူ စစ်ဖက် အရာရှိကြီးများသည် ဇင်းဒေါင်းတွင် ပြုလုပ်မည့် အခမ်းအနားတစ်ခုသို့ တက်ရောက်ရန် သွားရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
Laos Deputy PM Douangchay Phichit ‘dies in plane crash’
Rescue workers searched through the smoking wreckage
Laos Defence Minister and Deputy PM Douangchay Phichit has reportedly been killed along with other senior officials inamilitary plane crash.
The aircraft came down in the northern province of Xiangkhouang, nearly 500km (311 miles) from the capital Vientiane where its journey began.
The Laotian news agency and the Thai foreign ministry said the minister and his wife had died in the crash.
Up to 20 people were on board, including the governor of Vientiane.
Defence Minister Douangchay Phichit was reportedly travelling to an official ceremony
The official Laos news agency KPL said the plane that went down was an Antonov AN- 74TK-300 plane operated by the Laos air force.
It hasapoor air safety record. Last Octoberacivilian airplane crashed into the Mekong river in bad weather, killing all 49 people on board.
In 1998,aVietnamese military aircaraft crashed in Xiangkhouang. All passengers on board, includingasenior Vietnamese general, were killed.
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ပြီး စီး မှုနှင့် အမေရိကန်နိုင် ငံ တွင် ကျင်း ပ သည့် PGM အစည်း အဝေးနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် သတင်း စာ ရှင်း လင်း ပွဲ
By burmamuslim on May 9, 2014 | Leaveacomment
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၅ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့၌ကျင်း ပသည့် Partnership Group for Peace, Development and Democracy in Myanmar (PGM) အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့မှု အခြေ အနေများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို မေလ (၇)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ မင်္ဂလာခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ဗဟိုသန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားရာ တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့် သန်းခေါင်စာရင်းကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်က နောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ နှစ်ပေါင်း ၃၀ကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဟု ယေဘုယျ ပြောဆိုနေကြသော် လည်း ၁၉၈၃ ခုနှစ် ကောက်ယူခဲ့စဉ်က လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များအရ ပဋိပက္ခနယ်မြေများတွင် ကောက်ယူမှု မပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုနယ်မြေများတွင် နိုင်ငံ့သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခွင့် မရရှိခဲ့ဘူးဟု ဆိုရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သစ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ် ၃၀ ရက်တွင် နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ယူခဲ့ပြီးနောက် နှစ်လအကြာ မေ ၂ ရက်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်း မှာပင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပေးစေလိုသော ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုချက် အပေါ် ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်တော်များက အဆိုပြုတင်ပြလာမှုများ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ထိုသန်းခေါင်စာရင်းအစီ အမံသည် ပြည်သူ၏ဆန္ဒနှင့် အစိုးရ၏ အကောင်အထည်ဖော် မှု ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ် လာရသော အစီအမံတစ်ရပ် ဟုလည်း ပြောရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ပူးပေါင်းပါဝင် ကူညီမှုဖြင့် အဆင့်(၄)ဆင့်ပါ အစီအမံကို နာယကကြီး ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်း ဦးဆောင်သော ဗဟိုသန်းခေါင် စာရင်း ကော်မရှင်ကရေးဆွဲပြီး အဆင့်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့ပါကြောင်း၊ အဆင့်(၄)ဆင့်မှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း အဆင့်၊ မြေပြင် ကွင်းဆင်းစာရင်း ကောက်ယူခြင်းအဆင့် စာရင်းဇယားများ ပြုစုခြင်းအဆင့်နှင့် စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း အဆင့်တို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊
၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၂၉ ရက်တွင် ကွင်းဆင်း အသိပညာပေး လုပ်ငန်းစဉ် များပြီး ဆုံးပြီးနောက် မတ်လ ၃၀ ရက်မှ ဧပြီလ ၁၀ ရက်အထိ ၁၂ ရက်ကြာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် မြေပြင်ကွင်းဆင်း စာရင်းကောက် ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ စာရင်းကောက်ကွက်ပေါင်း ၈၁၀ဝ၀ ခန့်ရှိပြီး စာရင်းကောက်ပေါင်း ၉၀ဝ၀ဝ ခန့်နှင့် စာရင်းစစ်ပေါင်း ၂၅၀ဝ၀ ခန့်နှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဤအဆင့် သည် စီမံချက်အဆင့် (၂) ထဲက အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ကောက်ယူပြီး မေးခွန်းစာရွက်များကို ပြန်လည်စုစည်း သယ်ယူနေသည့် လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ကောက်ကွက် နေရာပေါင်း ၈၀ဝ၀ဝ ကျော်မှ မြို့နယ်/ခရိုင်/တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ထိုမှတစ်ဆင့် ဝန်ကြီးဌာနကို ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းလမ်းမှ အဆင့်ဆင့် သယ်ယူနေရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီမံချက်အရ မေလ ဒုတိယပတ် အတွင်း ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ သန်းခေါင်စာရင်းစီမံချက်၏ ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးခြင်းပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
မေးခွန်းပုံစံများ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အထားမှားခြင်းများ မဖြစ်စေရန် ကောက်ကွက်အားလုံးကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မြို့နယ်အလိုက် ကောက်ကွက်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကောက်ကွက် အလိုက် မေးခွန်းပုံစံများ ရေတွက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်စု နံပါတ်နှင့် ကောက်ကွက်စာရင်းချုပ်များ အားစစ်ဆေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် လုပ်ငန်းထိန်းပုံစံများ၊ မြေပုံများ ပါရှိခြင်း ရှိ/မရှိ ကိုလည်း စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲမှ လဝကဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုလုံး ဇွန်လကုန်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သန်းခေါင်စာရင်း၏ တတိယအဆင့် လုပ်ငန်းဖြစ်သော စာရင်းဇယား ပြုစုခြင်းကို စတင် စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုအဆင့်ကိုတော့ UNFPA အကူအညီဖြင့် DRS Company က ခေတ်မီနည်းပညာ အထောက်အကူပြု စက်ကိရိယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယင်းမှာ အကြမ်းဖျင်း ကိုးလခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပါကြောင်း၊ ယင်းနောက် စီမံချက် စတုတ္ထအဆင့်အဖြစ် အခြေခံလူဦးရေ စာရင်းဇယား ပြုစုထုတ်ပြန်ခြင်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလခန့်တွင် အပြီးသတ် ဆောင် ရွက်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ ကောက်ယူပြီးစီးခဲ့သော မေးခွန်းပုံစံများကို ပြန်လည် လက်ခံနေပြီး စာရင်းဇယားပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အဆင့်ဆင့် ဆောင် ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စကင်နာ မဖတ်ခင်တွင် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ စကင်နာ ဖတ်ပြီးချိန်တွင်လည်း အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ပြိုင် တည်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ထုတ်ပြန်ကြေညာရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည် ပြန်လည် စုစည်းရရှိသော အချက်အလက်များကို စက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖတ်နိုင်သော အခြေအနေပေါ် မူတည်ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ လက်ဝယ်ကို မေးခွန်းစာရွက်များ အစုံအလင် မရောက်ရှိသေးခြင်းကြောင့် အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက်များ အနည်းငယ် ကွာဟမှုများ ရှိနိုင်ပါကြောင်း၊
ဤနေရာတွင် ဆောင်ရွက်သမျှအပေါ် သုံးသပ်နိုင်ရန်အတွက် ယခင်သန်းခေါင်စာရင်း ကာလ၏ ကိန်းဂဏန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြသွား လိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတွင် သန်းခေါင်စာရင်း နောက်ဆုံးကောက် ယူခဲ့သော ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေမှာ ၃၅ ဒသမ ၃ သန်းခန့်ရှိ၍ ယနေ့ခန့်မှန်း လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ခန့်သာရှိပါ ကြောင်း၊
၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင် စာရင်းတွင် လုံခြုံရေး အခြေအနေများကြောင့် မကောက်ယူနိုင်ခဲ့သော ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၉၄၂ အုပ်စု၊ လူဦးရေ ၁ ဒသမ ၁၇ သန်းကျော် မကောက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၃ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မကောက်ယူ နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊
မကောက်ယူနိုင်ခဲ့သော နယ်မြေများအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၁၀၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၄၉၀၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၈၆၊ ကယားပြည်နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ၄၁၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅ အုပ်စုရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့အကြမ်းဖျင်းရရှိထားသော စာရင်းဇယားများအရ ကချင်ပြည်နယ်တွင် စာရင်းပေါက်နေသော ရွာများထဲမှ ကျေးရွာပေါင်း ၉၇ ရွာသာ စာရင်းကောက်ရန် ကျန်တော့ကြောင်းနှင့် ကျန်နေရာများတွင် ကွက်ပြည့်နင်း အပြည့်အဝကောက်ခံ နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ခရိုင်ငါးခုရှိသည့်အနက် ခရိုင်သုံးခု အတွင်း၌သာ လူမျိုးအမည်မှန် ဖြေဆိုမှုမပြု၍ ကောက်ယူရန် ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်မှအပ ကျန်ခရိုင်များကို အပြည့်အဝကောက်ယူ နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ကျန်နေရာများကို ထပ်မံကောက်ယူနိုင်ရေး အတွက်လည်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းနေပါကြောင်း၊ ဆွေးနွေးမှု ရလဒ်များအပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း အစီရင်ခံစာများတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယခုတစ်ကြိမ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ယခင်နှင့် သိသိသာသာ ကွာခြားသည့်အချက်မှာ ယခင်အစဉ်အဆက် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် စာရင်းမကောက်ခဲ့ရသော အထူးဒေသ(၂) ” ဝ ” ဒေသ၊ အထူးဒေသ (၄) မိုင်းလားဒေသ၊ ကိုးကန့်ဒေသ စသည်တို့အပြင် ကရင်၊ မွန်၊ ပအိုဝ်း၊ ရှမ်း၊ ကရင်နီ၊ ကယားအစရှိသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ နေရာများတွင် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုများ၏ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်၊ ကွက်ပြည့်နင်း ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ညီရင်းအစ်ကိုများ အကြား ထူးခြားစွာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သော ဖြစ်စဉ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက် လွန်စွာမှ ဝမ်းသာကြည်နူးဖွယ်ရာ ကောင်းသော ညီညွတ်ရေး ပုံရိပ်တစ်ခုဟု ပြောရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယင်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့သစ် ကာလအတွင်း အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော ရလဒ်ဟုလည်း ဆိုရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ သန်းခေါင်စာရင်း မြေပြင်ကွင်းဆင်း ကောက် ယူချိန် တွင် မိမိတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (UNFPA) က စိတ်ကြိုက်ရွေး ချယ်ထားသော အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ UK ၊ ဆွစ်ဒင်၊ ဆွီဇာလန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဂျပန်၊ နယ်သာလန်၊ အယ်လ်ဗေးနီးယား၊ တူနီးရှား၊ ကနေဒါ၊ ချီလီ၊ အီတလီ၊ တီမော၊ စင်ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အာဂျင်တီးနား၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ဘူဂီနာဖာဆို၊ ကွန်ဂိုစသော နိုင်ငံများမှ အတွေ့အကြုံရှိ လူဦးရေပညာရှင် ၂၃ ဦးနှင့် ပြည်တွင်းပညာရှင် ၂၃ ဦးပေါင်းစပ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ၁၅ ခု ၊ ခရိုင် ၄၀ ၊ မြို့နယ် ၁၂၀ ကို သွားပြီး စာရင်းကောက်ကွက် ၉၆၀ က အိမ်ထောင်စု ၁၈၀ဝ နှင့် လူဦးရေ ၂၁၉၄ ဦးကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ကြပါကြောင်း၊
မေးမြန်းချက်၊ ဖြေကြားချက်၊ တုံ့ပြန်ပြောကြား ချက်များကို စနစ်တကျ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ပြင်သစ်လူမျိုး Dr.Nancy Stiglar ခေါင်းဆောင်သော ကွင်းဆင်း လေ့လာရေးအဖွဲ့များနှင့် အလှူရှင် နိုင်ငံများဖြစ်သော ဩစတြေးလျ၊ ဆွီဒင်၊ အင်္ဂလန် (DEEID) တို့နှင့် ဧပြီ ၁၁ ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြန်လည်တွေ့ဆုံ သုံးသပ်ခြင်းများ လုပ်သည့်အခါ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှု အပေါ် တွေ့ ရှိချက်များ ထဲမှ အချက်အချို့ကို ထုတ်နုတ်ပြရလျှင်
– သန်းခေါင်စာရင်း အသိပညာပေး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု လွန်စွာကောင်းမွန်ကြောင်း၊
– မေးခွန်းပုံစံအပါအဝင် ပစ္စည်းများ နယ်စွန်နယ်ဖျား ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအထိ လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ကြောင်း၊
– ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလွန်ကောင်းကြောင်း၊
– စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကောက်များအား အဆင့်ဆင့်စနစ်တကျ သင်တန်းပေးထားခဲ့သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊
– စာရင်းကောက်များ ဒေသခံ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ပြီး လူထုအား လေးစားစွာ ဆက်ဆံကြကြောင်း၊
– ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရိုဟင်ဂျာ ဟုဆိုသော ပြဿနာမှလွဲ၍ ရောက်ရှိခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ မေးခွန်းအား လွတ်လပ်စွာ ဖြေကြားကြကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးစုတွင် မူလရှိပြီး လူမျိုးအမည်မှန် ဖြေသူများအား သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာဟု ဖြေသူအား လူမျိုးအမှန်ကိုသာ ဖြေကြားပါရန် ရှင်းပြကြကြောင်း၊
– အိမ်ရှင်မှ ရိုဟင်ဂျာဟု အတင်းအကျပ်ရေးသားရန် တိုက်တွန်းပြီး ဆန့်ကျင်မှုများပြုလုပ်နေပါက စာရင်းကောက်ယူမှု မပြုတော့ကြောင်း၊
-ယခု သန်းခေါင်စာရင်းကောက် ယူခဲ့ခြင်းသည် စမ်းသပ်စာရင်း ကောက်ယူခြင်း ဆောင်ရွက်စဉ်ကထက် ပိုမိုပြည့်စုံ ကောင်းမွန်ကြောင်းဖြင့် ပါရှိပါကြောင်း၊ အလှူရှင်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက ပါဝင်ဆွေးနွေးမှတ်ချက် ပြုခဲ့သည့် အချက်အချို့ကို ထုတ်နုတ်ပြရလျှင် ရခိုင်ဒေသတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စအပေါ် အနည်းငယ်စိုးရိမ် သည်မှလွဲ၍ ကျန်နယ်မြေဒေသ အားလုံးတွင် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနှင့်အညီ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူနိုင်သဖြင့် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသမှရရှိလာသည့် အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်လေ့လာပြီးမှ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် မေးခွန်းလွှာများ ပြန်လည်ပို့ဆောင်မှု အထူးဂရုပြုရန် အကြံပြုလိုကြောင်း၊ ဆက်လက် ပူးပေါင်းကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါကြောင်း၊ သဘာပတိဖြစ်သူ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပညာရှင် Mr.Wemer Haug က နိုင်ငံများတွင် သန်းခေါင်စာရင်း လုပ်ငန်းကို ၁၀ နှစ်တစ်ကြိမ် ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ် ၃၀ မကောက်နိုင်ခဲ့၍ မကောက်ဖူးသည့် နိုင်ငံဟုပင် ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခုသန်းခေါင်စာရင်း လုပ်ငန်းသည် အမှားနည်းပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့၍ ဂုဏ်ယူပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ အလားတူပင် မိမိတို့နှင့်အတူ သန်းခေါင်စာရင်း ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် အတူတကွ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံတကာ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ (International Technical Advisory Board-ITAB) နှင့် ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးချက်အရ မြေပြင်ကွင်းဆင်း စာရင်းကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းအပေါ် သုံးသပ်ချက်ကိုလည်း ဆက်ပြီးတင်ပြလိုပါကြောင်း၊ ITAB အဖွဲ့ဆိုသည်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း စီမံချက်အဆင့်တိုင်းကို နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂ အစီအစဉ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ၁၄ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာလူဦးရေ ပညာရှင်များပါသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း။ ITAB အဖွဲ့ဝင်များက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသတွင် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါက စာရင်းပြန်ကောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ဟု အကြံပြုပါကြောင်း။ ITAB အဖွဲ့၏ တွဲဖက်သဘာပတိဖြစ်သူ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပညာရှင် Mr. Wemer Haug က သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လိုက်နာရမည် ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံ၏ ပကတိ အနေအထားပေါ် မူတည်စဉ်းစားရပါသည်ဟု ပြောခဲ့ပါကြောင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ပညာရှင် Mr.Paulchaung ကလည်း သန်းခေါင်စာရင်း အောင်မြင်မှုအပေါ် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ ရခိုင်ဒေသတွင် လူမျိုးအမည် ပြဿနာသည် နိုင်ငံရေးပြဿနာ (Political Problem) ဖြစ်သည့်အတွက် နည်းပညာပိုင်း Technical နည်းဖြင့်ဖြေရှင်း၍ မရဟု ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ပညာရှင် အချို့ကမူ စာရင်းကောက်ရန် ကျန်သည့် Under count ကိစ္စသည် သန်းခေါင်စာရင်းလုပ်ငန်းတွင် အစဉ်အမြဲဖြစ်နေသည့် ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Under count မှာမူ Systematic Under count ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ သန်းခေါင်စာရင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ကနဦးအစပိုင်းတွင် အခက်အခဲမျိုးစုံဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသော်လည်း နောက်ဆုံးတွင် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ပေးမှုကြောင့် နိုင်ငံဧရိယာ အားလုံးနီးပါးကို ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအနေဖြင့် မေးခွန်းပုံစံ လက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ရှေ့ပြေးလူဦးရေ စာရင်းကို ယခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် နေရာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်ထိ ထုတ်ပြန်ကြေညာမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် မိမိတို့သန်းခေါင်စာရင်း၏ လွှမ်းခြုံနိုင်မှုနှင့် ဖြေကြားမှု ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း ထိုအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ သန်းခေါင်စာရင်း ဆိုသည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မူတည်ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်သာဖြစ်ပြီး အခြားကိစ္စများနှင့်ရောထွေး မစဉ်းစားသင့်ဘဲ စံချိန်စံညွှန်းဆိုသည့် ရှုထောင့်တစ်မျိုးတည်းက မူတည်စဉ်းစားပြီး ဆောင်ရွက်စေခြင်းထက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရာအားလုံး ယိုယွင်းပျက်စီးနိုင်မှု၊ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှု စသည့် အကျိုးဆက်များကိုပါ ဆက်စပ်ပြီး မျှမျှတတ စဉ်းစားပေရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဟုလည်း ပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ် ကာလအတွင်း သုံးနှစ်နီးပါး အချိန်ယူပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသော ပြည်လုံးကျွတ်အဆင့် သန်းခေါင်စာရင်း လုပ်ငန်းကြီးသည် နိုင်ငံတော်အကျိုး၊ ပြည်သူများ၏ အကျိုးကို လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်ကာလများတွင် တစ်ခန်းတစ်ကဏ္ဍ အနေဖြင့် အကျိုးပြု ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ရိုးသားစွာ ယုံကြည်လက်ခံထားပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယင်းအမျိုးသားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတွင် ဘက်ပေါင်းစုံ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြသော ပြည်သူလူထု တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုအပေါင်း တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ကာလတစ်လျှောက်လုံး အတူလက်တွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNFPA) ကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့၏ ကိုယ်စား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင် အပ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် PGM အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် သတင်းမီဒီယာများက သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးကြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ကြသည်။